Uncategorized | Mg Ogga's Notes
စာအုပ်အမည်။ ။ သ်ိမ့်မွေ့သောလမ်း (The Gentle Way of Buddhist Meditation) ပြန်ဆိုရေးသားသူ။ ။ ဒေါက်တာအရှင်အရှင်အာစာရ မူရင်းရေးသားသူ။ ။Godwin Samararatne ပုံနိုပ်တိုက်။ ။ ဒီမိုးစာပေ မျက်နှာဖုံး။ ။သာအေးည မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ် ရှိ Liberal Art အစီစဉ်က BARS Religion မေဂျာကျောင်းသားတွေ ကို ဒုတိယနှစ်ကနေ စပြီး စာသင်ကြားဖြစ်တယ်။ ဒုတိယနှစ်အတွက် Basic Concept of Theravada Buddhism တတိယနှစ်အတွက် Buddhist Meditation နောက်ဆုံးနှစ်အတွက်ကတော့ Today Buddhism ဆိုပြီး အတန်း သုံးတန်း ကို ၃ ဘာသာ သင်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာ Religion Major ယူတဲ့…
November 6, 2017 in စာအုပ်များ, ညွန်းပါရစေ, ဘာသာရေးရာ, Uncategorized.
ပန်းချီကျော်ဖြူစံ စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ ၂၀၁၆ သြဂုတ်လ ရောင်းဈေး တစ်အုပ် ၇၀၀၀ ကျပ် (နှစ်အုပ် ၁၄၀၀၀) အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ဆရာတော်တွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ ဆရာတော်တွေ ညည်းကြတယ် စိုးရိမ်ကြတယ်။ ခေတ်ကာလသားသမီးတွေ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုလျော့နည်းလား သတဲ့။ ဘာသာရေး စာပေတွေ ဖတ်ရှုတာ နည်းလာသတဲ့။ ကလေးတွေ အတွက် ဘာသာရေးစာပေတွေ နည်းတယ်။ ဘုရားဒကာ ကျောင်းဒကာတွေ အတွက် ဟောတဲ့တရားများပေမဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဘာသာရေးနဲ့ အနေဝေးသူတွေ အတွက် ဟောတဲ့ တရား ရှိသော် ရှိညား ရှားလှတယ်။ ရှေးရှေးဆရာတော်ကြီးများဖြစ်တဲ့ လယ်တီဆရာတော်ဆို ပရမတ္တဒီပနီလို အဆီအနှစ် မြင့်ပေ့ ခက်ပေ့ နက်နဲလှတဲ့ ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင်များကို ရေးခဲ့သလို သုံးလူရှင်ပင် လို ပါဠိတစ်လုံးမပါ မြန်မာစာ သက်သက်နဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ…
ငယ်ငယ်က ပုံပြင်တွေ နားထောင်တဲ့ အခါတိုင်း တိုတိုလေးနဲ့ ပြီးသွားတဲ့ ပုံပြင်တွေဆို သိပ်မကြိုက် ပုံပြင် အရှည်ကြီးကို အကြာကြီး နားထောင်ရမှ ကျေနပ်တယ်။ ကျနော်ကို ငယ်ငယ်က ပုံအမြဲပြောပြတဲ့ အဖေ အမေ နဲ့ ဘဘတို့ က အမြဲတမ်း ကျနော်အကြိုက်ပုံပြင်အရှည်ကြီးတွေကို ရွှေးရွှေးပြောရတာ အမောပါပဲ။ နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ ပုံပြင်တွေထဲ နှစ်သက်စွဲလမ်းခဲ့တဲ့ ပုံပြင်တွေအတော် အများက Myth ဆန်ဆန် ပုံပြင်တွေ ဖြစ်တယ်။ ပျူစောထီး၊ ပန်ထွာဘုရင်မ၊ သုဓနုနဲ့ ဒွေးမယ်နော်စတဲ့ Myth ဆန်ဆန် ပုံပြင်တွေကို အသေကြိုက်တယ်။ ဒီလိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံပြင်တွေထဲ က သုဓနုမင်းသားနဲ့ ဒွေးမယ်နော်ပုံပြင်ဟာ အလွန်တရာရှည်လျား ထွေးပြားလှတဲ့ ပြည်ထောင်စုအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး အသီးသီးရဲ့ အခြား…
November 6, 2017 in ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးထမ်း, ဆောင်းပါး, Uncategorized.
ဆက်-ကြိ / နှုတ်ဆက် / လူချင်းတွေဆုံသော အခါ ဖြစ်စေ၊ လူချင်း ခွဲခွာသောအခါဖြစ်စေ လောကဖွယ်ရာစကား ပြောဆိုသည်။ မြန်မာ အဘိဓာန် အကျဉ်းချုပ်(အတွဲ ၂) ကျနော်တို့လူတွေမှာ နေစဉ်နေတိုင်းပဲ ပြောနေ ဆိုနေရတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ နှုတ်ဆက်တဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပါပဲ။ ကိုယ်သိတဲ့လူ ကိုယ်ခင်တဲ့လူ၊ ကိုယ်မျက်မှန်းတန်းနေတဲ့လူ ကို တွေ့မိတဲ့အခါ ကျနော်တို့ နှုတ်ဆက်ကြတယ် လောကွက်ပြုတယ်။ ဒါဟာ လောကကို နေချင့်စဖွယ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ လူသားတွေ ယဉ်ကျေးမှု ပြယုဂ် တစ်ခုပါပဲ။ ကရင်ကြီးက အော်မေဝှီးလယား လို့ နှုတ်ဆက်မယ်။ ကချင်ကြီးက ကဂျာအီး လို့ နှုတ်မက်မယ်။ မွန်ကြီးက မညေးရာအောင် လို့ နှုတ်ဆက်မယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေက မင်္ဂလာပါ လို့…
ပုံပြင်တွေမှာမယုံကြည်နိုင်တာတွေ မဖြစ်နိုင်တာတွေ ပါလို့ မယုံရင် ပုံပြင်လို့မှတ် ဆိုတဲ့ စကား ပေါ်လာတာလိုထင်တယ်။ ပုံပြင်တွေ က မယုံနိုင်စရာတွေ မဖြစ်နိုင်တာတွေဆိုတော့ ပုံပြောသူတွေကလည်းပေါက်ပန်း လေးဆယ် မဖြစ်နိုင်တာတွေ ကူလီကူမာလုပ်ပြောတဲ့ သူတွေပေါ့လေ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲထင်ထင်ပုံပြောသူများကတော့ ပုံပြင်တွေကို ပြောခဲ့ကြ၊ဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့ ရှေးလူကြီးသူမတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ကလေးတွေ၊ ပုံပြင်နားထောင်သူတွေကို စိတ်ပျော်အောင် ရွှင်လန်း အောင် လုပ်တတ်ရပါပေတယ်။ အံ့သြစရာ၊စိတ်ပျော်ရွှင်စရာ၊ တစ်ခါတစ်ခါ သည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာ ကြောက်စရာလန့်စရာ ရသတွေ အစီအရီ လှလှပပလိမ်းခြယ်ထားတဲ့ ပုံပြင်တွေကို ငယ်ငယ်က ကြားပြီးရင်း ကြားချင်တယ်။ အမေအမြဲပြောပြတဲ့စနိုးဝှိုက်၊ စင်ဒရဲလား၊ မယ်ထွေးလေးနဲ့ မြွေမင်းသားပုံပြင်တွေ အဖေအမြဲပြောတဲ့ အာဖျံထီး၊မူလာနာစရီဒင်၊ တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တွေ၊ အဘိုးပြောတဲ့ ၅၅၀ နိပါတ်ထဲက ဘုရားလောင်းမျောက်မင်း၊နိဂြောဓသမင်၊ ဟိတောပဒေသ ပုံပြင်တွေ များပါးလှတဲ့ပုံပြင်တွေ အဖန်တစ်ရာတေကြားဖူးပေမဲ့အပြန်ပြန် ပြန်ကြားချင်နေတုန်းပဲ…
November 6, 2017 in လူမှုရေးရာအဖြာဖြာ, ဆောင်းပါး, Uncategorized.
နေနှင့် နဂါး မျိုးနွယ်များ ဆီ ၁
ရွှေပလောင် ငွေပလောင် တောင်ခြေနန်းမှာနန်းမှာ မြူမှောင်ဝေသန်းကာ သန်းကာ ရဗန်မြန်း[i]ကိုတော့ လှမ်းကြစို့ ညီညီညာ ခရမ်း[ii]အဆန်းကိုတော့ ဒီတန်း[iii]ကလွယ်မှာ လွယ်မှာ ဟေ့ ဟေ ကြည်နူးစရာ ပျို့တို့ ပတ်မြန်း[iv]မှာ မြန်းရှုပီ[v]ရွှေဖီဦး ပျော်မြုးဆွတ်ခူးမှာ။ (ဒါရိုက်တာဦးမြင့် ပလောင်မင်္ဂလာဆောင် ဆောင်းပါးမှ) ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းသို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်း သိန်းစိုးကကျနော်ကို ရှမ်းမြောက်(ကွတ်ခိုင်)ကို သွားဖို့ ပြောလာတော့ အတော်လေး ပျော်မိတယ်။ ဆရာဘိုကတော့ကျနော့် ကျန်းမာရေးကြောင့် သိပ်ပြီး ဝေးဝေးလံလံ မသွားစေချင်။ နောက်ရဲဘော်ဆွေစင်က သွားမှဖြစ်မယ်ပြောလာတော့ကျနော် ကွတ်ခိုင်သွားဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်ကို အရင်ထဲကသွားချင်ရောက်ချင်နေပေမဲ့ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် မသွားဖြစ် အခုတော့ ကွတ်ခိုင်နယ်တအာင်း(ပလောင်) ဘုန်းတော်ကြီး တွေ အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကိုသွားကူရမှာဆိုတော့ ပျော်ပျော်ကြီးကို…
January 10, 2015 in ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးထမ်း, အတွေ့အကြုံ, Uncategorized.
ကျွန်တော် သတိထားမိတာကတော့ သူဟာ လောလောလတ်လတ် မုတ်ဆိတ်မွှေး တွေ ရိတ်ထားပြီး ၊ သူကျယ်သီးတွေလည်း ခိုင်မြဲစွာတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ သူအင်္ကျီကို သေသေချာချာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ချုပ်ထားတာကြောင့် ချုပ်ရိုးတွေကို တောင်မမြင်ရပါဘူး။သူဟယ ကျွန်တော့်ကို စွတ်ပြုတ်ပေးသောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့က သူ့ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆေး တံဆေးတစ်ထုပ် ကိုပေးတဲ့အခါမှာ သူက ဆေးတံ၊ဆေးလိပ်မသောက်တတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သူနဲ့ခွေး ကအနားမှာ ရှိနေပြီး ၊သူ့သခင်ကို အရမ်းဖက်လှဲတကင်း မလုပ်ပေမဲ့ လဲ ခင်မင်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွတ်တော် အဲဒီမှာ ပဲ ညအိပ်ဘို့ သူကချက်ချင်းပဲသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ အနီးဆုံး ရွာ က အနည်းဆုံး နောက်ထပ် နှစ်ရက်လောက် လျှောက်သွားရအုံးမယ် ။ ဒီဒေသမှာ ရွာတွေ အလွန်နည်းပါးပြီး တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အလှမ်းကွာဝေးတယ်။
January 25, 2010 in ဝတ္ထုတို, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ, Uncategorized.